Cristiano Ronaldo oo wajahaya Afar loollan kahor inta uusan dhammaan xilli ciyaareedkan - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
May 4, 2021 at 10:07 Cristiano Ronaldo oo wajahaya Afar loollan kahor inta uusan dhammaan xilli ciyaareedkan2021-05-04T10:07:45+02:00 CAYAARAHA
(Turin) 04 Maajo 2021. Mustaqbalka xiddiga Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa shaki badan la gelinayaa iyadoo xagaagan ay suuro gal tahay inuu laacibkan isaga hayaamo Turin.
The Old Lady ayaa lumisay xilli ciyaareedkan hanashada horyaalka Serie A oo ay dooneysay inay markeedii 10-aad oo xiriir ah hanato kahor inta aysan Scudetto gacanta ku dhigin naadiga Inter Milan.
Haddaba tan iyo dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaa hor yaalla Ronaldo afar shaqo kahor inta uusan ka dhaqaaqin Bianconeri.
Inuu Juventus usoo saaro Champions League
Juve ayay qasab ku tahay inay usoo baxdo Champions League xilli ciyaareedka dambe haddii aysan taas dhicinna, waxaa lagu soo warramayaa inuu Ronaldo isaga tagi doono naadigiisa.
CR7 ayaa heysta rikoorka gooldhalinta taariikhda Champions League isagoo dhaliyay 134, balse naadigiisa ayaa laga yaabaa inay lumiso boosaska afarta sare ee loogu soo baxo UCL maadaama ay isku dhibco yihiin kooxaha kooxaha Atalanta iyo AC Milan, sidoo kalena waxaa la dhibcood u jirta naadiga Napoli oo booska shanaad fadhisa halka Lazio oo kulan baaqi ah heysatana – kuna jirta booska lixaad – ay shan dhibcood ka dambeyso naadiga lagu naaneyso Marwada Duqda.
Inuu kula guuleysto koobkiisa shanaad
Marka la gaaro 19-ka bisha May, maalmo ka hor inta aysan ciyaarin kulankooda uga dambeeya ee Serie A, Juve ayaa fiinaalka Coppa Italia kula balansan Atalanta garoonka Mapei Stadium ee ay ku ciyaarto kooxda Sassuolo.
Ciyaartaas waxay Ronaldo siineysaa fursad uu kooxdiisa kula guuleysto koobkiisii shanaad isagoo horraan la qaaday afar koob oo isugu jira labo horyaal oo Serie A ah iyo labo tartanka Supercoppa Italiana.
Inuu noqdo ciyaaryahankii ugu horreeyay ee saddex horyaal oo waaweyn isagoo ku sugan noqda gooldhaliyaha ugu sarreeya
Labadiisii xilli ciyaareed ee ugu horreeyay waayihiisa horyaalka dalka Taliyaaniga, Ronaldo kuma uusan guuleysan gooldhalinta horyaalka, waxaana fasalkii 2018-19 ku guuleystay Fabio Quagliarella halka 2019-20 uu gacanta ku dhigay Ciro Immobile gooldhalinta Serie A.
Balse xilli ciyaareedkan, Kabtanka Portugal ayaa 27 gool ku hoggaaminaya Serie A isagoo lix gool ka sarreeya laacibka kusoo xiga ee Romelu Lukaku, waxaana haddii uu fasalkan ku dhammeysto isagoo ah Capocannoniere (goodhaliyaha ugu sarreeya Serie A), waxa uu noqon doonaa laacibkii ugu horreeyay ee ku guuleysta gooldhalinta saddex ka mid ah shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub.
Inuu dhaliyo goolkiisii 100-aad ee Juventus
36-jirka weerarka ka ciyaara ayaa kasoo tagay Real Madrid isagoo celcelis ahaan u dhaliyay Los Blancos gool ama wax ka badan kulankiiba kaddib 451 gool oo uu ku dhaliyay 438 kulan, balse haatan waxa uu heystaa rikoor ka liita kii Madrid marka la fiiriyo celceliska gool kulankiiba.
Xiddiga shanta jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ayaa 99 gool u dhaliyay Juventus kaddib 129 gool, taasoo ka dhigan inuu hal gool u jiro goolkiisii 100-aad ee Bianconeri.
Si kastaba ha ahaatee, Ronaldo ayaa haatan barbarreeyay rikoorka goolasha guud ee uu Paulo Dybala u dhaliyay Juventus, waxaana uu sidoo kale kaalinta 13-aad kaga jiraa gooldhaliyaasha ugu sarreeya taariikhda kooxda ka dhisan Turin isagoo eegaya inuu gaaro Michel Platini oo heysta 104 gool iyo John Charles oo 105 gool u dhaliyay kooxda The Juve.
« Axkaamta Ramadaanta, Sheekh Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan-Rakuub, Q.22aad
Libaaxa (WQ: Dr. Ibraahin Dhuxul) »